Dowladda Somaliya oo heshiis la gashay Shirkad Caalami ah – STAR FM SOMALIA
Dowladda Somaliya oo heshiis la gashay Shirkad Caalami ah
Dowladda Somaliya ayaa heshiis la saxiixatay Shirkad ka shaqeysa la talinta dhanka Qaybsiga Kheyraadka, sida lagu sheegay War Qoraal ah oo ka soo baxay Wasaarada Macdanta iyo Batroolka Xukuumadda Somaliya.
Heshiiskaan ayeey Dowladda Federalka Somaliya la gashay Shirkadda IMMMA Advocates, taasi oo qaabilsan kala talinta sharciyada ku aadan Kheyraadka ama wax soo saar qeybsi u dhaxeeya Dowladda iyo Shirkadaha kale.
Shirkadan Dowladda ay heshiiska la gashay ayaa laga dhex doortay Shan Shirkadood oo u soo tartamay booskaan, kadib markii laga dhex xushay Shirkadan IMMMA Advocates.
Soomaaliya waxaa arrintaas xulashada dowladda gacan ku siiyay African Legal Support Facility (ALSF) oo ah laan ka tirsan African Development Bank oo muhiimadeedu tahay in dalalka Afrika ku gacansiiyaan wixii talo iyo tusaale ah oo arrimhan Wax soo saar qeybsi la xiriira.
Qoraalka ka soo baxay Wasaarada Batroolka Dowladda Somaliya ayaa lagu sheegay in Shirkada IMMMA Advocates ay ku guuleysatay Heshiiskaan, kadib markii laga helay Dhamaan Shuruudihii laga doonaayay.
Wasiirka Batroolka Xukuumadda Somaliya ayaa tilmaamay in heshiiskaasi uu ku cadaanayo waxa ay leedahay Dowladda Somaliya iyo Shirkada qaabilsan Baaritaanka Shidaalka dalka Somaliya.
Ciidmada dawlada ayaa hoolgalo kawda magaalada qoryooley kadib dagaal xoogan oo xalay halkaasi ka dhacay